कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: कुशल कर्म नै धर्म हो ... गीता शाक्य, लगनखेल, ललितपुर
कुशल कर्म नै धर्म हो ... गीता शाक्य, लगनखेल, ललितपुर
गायीकाः गीता शाक्य
ज्ञानमाला भजनबाटै मानविय जीवनमा सतकर्म, धर्म र ज्ञान प्राप्त गर्ने साधना हो । संगीत कला क्षेत्रमा लामो समय निरन्तर भजन गायनमा समर्पित गायीका गीता शाक्य संगको छोटो संवाद ।
१.गीताजी के मा व्यष्ट हुनुहुन्छ ?
—हिजो आजको परिस्थितिले गर्दा संगठित रुपमा ज्ञानमाला भजन ठप्पनै छ भन्नु प¥यो तर पनि अहिले एउटा नयाँ भजनगीत रेकर्ड गर्ने तयारिमा रियाज क्रम जारी छ ।
२.१८ वर्ष निरन्तर ज्ञानमाला भजनमा लाग्नु भयो, कतिको बुद्धज्ञान प्राप्त गर्नु भयो ?
—बुद्ध ज्ञान प्राप्तीको निम्ति समयको हिसाब हुँदैन, त्याग तपस्या र बलिदानको आवस्यक्ता हुन्छ । हामीले त बुद्धको उपदेश –शिक्षा) सांगीतिक मार्फत प्रस्तुत गर्ने हो । जती ज्ञान प्राप्त गरें त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासको निम्ति हामीहरु ज्ञानमाला भजनमा लागी रहेका छौं ।
३.ज्ञानमाला भजनमा ज्ञानै ज्ञानको माला बुनिन्छ सत्य हो ?
—शान्तिको लागी एक चित्त भएर अगाडी बढनुनै बुद्धधर्म र मानविय कर्म हो । बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यौं भने सुख शान्ति र आनन्दमय जीवन यापनमा मदत पु¥याउछ । लोभ पाप र मोहको अन्त हुन्छ ।
४.ज्ञानमाला अज्ञानीहरुको निम्ति अर्थहिन हैनर ?
—ज्ञानमाला कहिल्यै कसैको लागि अर्थहिन हुँदैन, अबुझ र अज्ञानीहरुलाई ज्ञान दिलाउँदै अज्ञानबाट मुक्त पार्ने उपाय नै ज्ञानमाला हो । सहज रुपमा बुझन सक्ने र क्षमता अनुसार ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने छ ।
५.गायीका संग हुनुपर्ने ज्ञानहरु के के हुन ?
—सुर, संगीत, तालको साथै शुद्ध उचारण र शब्दको भावनात्मक अभिव्यक्त गने क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ ।
६.भजन गीत गाउँदा मन हलुका हुन्छ, सुन्नेले के पाउंछ ?
—गीत भनेको मन वहलाउने शुत्र मात्र नभई देवी देवताहरुको गुणलाई दर्शाएको हुन्छ अझ बुद्धभजन गीतमा मानव जातीलाई सही तरिकाले जिउने मार्ग दर्पण गराउंछ । विभिन्न अर्ती उपदेश पाउने भएकोले श्रोताहरुको मन आनन्द हुन्छ ।
७.महिलाहरु घरको कामबाट पंछिन ज्ञानमाला भजनमा लाग्छीन भन्छननी ?
—आरोप लगाउनेको मुख कस्ले थुन्न सक्छ र , महिलाहरुको उन्नती हेर्न नसकेर होला, सांचै भन्नु पर्दा जुन कुनै क्षेत्रमा पनि पुरुष सरह काम गरेकै छ ।
८.अरुलाई पाप गर्न लगाएर धर्म कमाउनेलाई के भन्नु हुन्छ ?
—स्वार्थी अधर्मी । धर्म भनेको कुशल कर्मलाई भनिन्छ । चित्त शुद्ध गरी सम्पूर्ण मानव जातीको हितमा कुशल कर्म गर्नुनै धर्म हो ।
९.महिला हिंसा भन्नाले के बुझनु हुन्छ ?
—लिङ्गभेड गर्दै पहिचानको निम्ति अगाडी बढनबाट बाधा पु¥याउन सबैखाले कृयाकलापलाई म महिला हिंसा भन्न चाहन्छु ।
१०.तपाईंले कतिवटा गीत गाउनु भयो ?
—म प्रायः भजन गीत समुहमा गाउन मन पर्छ धेरै गीतहरु पनि गायीसकें एकलमा भन्नु पर्दा ३ वटा मात्र रेकर्ड भयो ।
११.किन म्युजिक भिडियो निर्माण गरिन्छ ?
—सुनमा सुगन्ध ठप्न अर्थात शब्द र संगीतको भावनालाई अभिनयको प्रस्तुतीबाट छरप्रष्ट अभिब्यक्त गराउँदै भाषा नबुझने. दर्शकहरुलाई बुझाउन ।
—	कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक पत्रिका मार्फत मनका कुराहरु व्यक्त गर्न पाउंदा धेरै खुसि लाग्यो, साप्ताहिक परिवारप्रति हार्दिक अभिवादन ।